सप्तरीमा इस्लाम धर्मावलम्वीहरुले हर्सोउल्हासका साथ मनाईदै बकर ईद - News Today
सप्तरीमा इस्लाम धर्मावलम्वीहरुले हर्सोउल्हासका साथ मनाईदै बकर ईद
बिरेन्द्र बजार, ०६ साउन ।
सप्तरी लगायत देशैभरी मुस्लिम समुदायले बुधबार हर्सोउल्हासका साथ बकर इद पर्व मनाएका छन् । धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव र आपसी एकताका साथ ईस्लाम धर्मावलम्बीले बकर इद मनाएका हुन् ।
तीन दिनसम्म धुमधामका साथ मनाईने मुस्लिम समुदायको पबित्र महान पर्वमा नयाँ कपडा लगाउने, आफन्तकोमा आउने–जाने मिठो परिकार बनाएर खाने चलन रहेको छ । इद पर्वमा मुस्लिम वस्ती र मस्जिदहरुमा चहलपहल पढेको छ । जिल्लाको राजबिराज, रुपनी, कल्याणपुर, बिसनपुर, महुली, बिरेन्द्र बजार, बोदेबर्साईन, फत्तेपुर लगायतका मुस्लिम बस्ती, चौक तथा मस्जिदहरुमा बिहानै देखी भिड लागेको छ ।
इद पर्वको अबसरमा सामुहिक कार्यक्रम सभा–सम्मेलन आयोजना गरि एक–आपासमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने, ईष्टमित्र छरछिमेकलाई बोलाएर खुवाउन आजदेखि शुरु गरिएको छ । यो निरन्तर तीन दिनसम्म चल्ने राजबिराज ३ का बब्लु खानले बताए । उनले कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी मस्जिदमा गई सामाजिक दूरी कायम गर्दै नवाज पढेको जानकारी दिए । यस पर्वलाई ईदुल अजाहा अर्थात कुर्वानी इद (इद कुरवाँ) भन्ने चलन छ । यस पर्वको धार्मिक मान्यता र पर्वको आस्था र बिश्वास कुर्वान अर्थात बलि रहेकोले आफ्नो गच्छे अनुसार खसी राँगाको कुर्वानी (बलि) दिन र त्यो बलि दिएको मासुलाई तीन भाग लगाएर खाने चलन रहेको मुस्लिम अगुवाहरु बताउछन् । कुर्वानी दिएको मासु एक हिस्सा आफू राख्ने र बाँकी दुई हिस्सा गरिव, असाहय र बिपन्न तथा आफन्तजन, ईष्टमित्र, घरपरिवार मिलेर बाँडेर खाने चलन रहेको अग्निसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका ३ का मो. जाकिरले बताए ।
तीन दिनसम्म मनाईने इद पर्वमा कुर्वानीको दिन भने निश्चित नहुने र कुनैपनि दिन पर्ने कुर्वानीको धार्मिक मान्यता हरेको मुस्लिम समुदायहरुको भनाई छ । ईस्लामिक मिठी इदको रुपमा मनाउने रमजान सकिने बित्तिकै बकर इद मनाउने परम्परा रहेको खडक नगरपालिका ९ का मो. ईझारुल मियाँले बताए । अरु चाड भन्दा बकर इदको महत्व भने भिन्न रहेको उनको भनाई छ । यस पर्वको मुख्य धार्मिक महत्व भनेको कुर्वानी हो, उनले भने, कुर्वानी भनेको रक्षाका लागि सधै तत्पर रहनु भन्ने बुझिन्छ ।
हजरथ महमदको आदेश अनुसार कुनै पनि ब्यक्ति आफ्नो देश, समाज परिवारका लागि जस्तो जुकै बलिदानी दिन पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने धार्मिक बिश्वास र मान्यताले बकर इदमा कुर्वानी दिने चलन बसेको उनले बताए । इद उल जोहोको सामान अर्थात कुर्वानीको सामान बिभाजन भएको तीन हिस्सामा १ आफू राखिन्छ २ हिस्सा समाजका लागि बाँड्न राखिन्छ र त्यो तुरुन्त बाड्नुपर्ने मियाँले जानकारी दिए । अनका अनुसार बकर इदको धार्मिक मान्यता र ईतिहास बमोजिम अल्लाहाको हुकुमले हजरथ ईब्राहिम आ ईस्लामिकले आफ्नो छोरा ईस्माईल आलाई अल्लाको आदेशले आज्ञापलनमा सर्वप्रिय आफ्ना छोरालाई कुर्वानी गर्न जंगल कुर्वानी (बलि चढाउन) घोप्टो तेर्साएर तरवार उचालेर हान्न लाग्दा अल्लाहले त्यो ठाउँमा एउटा खसी पठाई बलि चढाएको र छोरोलाई बचाई दिएको स्मृतिमा नै मुस्लिम धर्मावलम्बीले खसि, राँगाको बलि चढाउने तथा बकर इद पर्वको रुपमा मनाउने चलन बसेको मुस्लिम समुदायहरुको भनाई छ ।
यो पर्व १४३९ बर्ष पहिलेदेखि मुस्लिम धर्मावलम्बीले मनाउँदै आएको उनीहरुको कथन छ । बकर इदको अबसरमा आज (साउन ६) गते सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ । साथै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, राजनैतिक दल, संघ संस्थाहरु साथै ब्यक्तिगत रुपमा सामाजिक संजालहरुमा समेत बकर इदको शुभकामना व्यक्त गरिएको छ ।
Previous : सप्तरीमा श्रवण देवको संयोजकत्वमा मानवअधिकारको सम्मानका लागि समिति गठन
Next : राज्यमन्त्री कर्णद्वारा सहिदको सालिकमा माल्यार्पण